Kuti uvandudze kunyatsoita otomatiki kuumbwa muchina, diki chitubu micheto yetambo yekuparadzanisa inotarisirwa uye yakanyatsogadziriswa. Muchina wekuumba unomhanya zvakanaka uye zvakavimbika, uye iyo hydraulic system inotyaira yakachengeteka mashandiro. Iyo michina ine yakagadzirirwa manipulator, iyo inoderedza ...
Pane zvakawanda zvinokanganisa mu hydraulic system yemuchina wekugadzira muchina. Semuenzaniso, kusvibiswa kwemafuta kunogona kukonzera iyo hydraulic control system yekushanda kumanikidza, kuyerera kana kunongedzera kune kusashanda, uye kuunza kuoma kukuru kune iyo hydraulic system yekukanganisa kuongororwa. Nhanho inotevera ...
Ndezvipi nyaya zvinofanirwa kutariswa kana otomatiki kuumbwa mutsara marongero?
1. Kusarudzwa kwemakina makuru uye ebetsero michina yemuchina wekugadzira webhizimusi rekuumba uye marongero emutsara wekugadzira. Rudzi rwezvinhu izvo zvinonyanya kukanganiswa neiyo modelling dhizaini, senge yakajairika ivhu jecha, sodium silicate jecha uye resin jecha; moding yekutsvagisa nzira ...
Ndezvipi zvikonzero nei otomatiki Kuumbwa muchina asingavhunduki?
1. Mukuita kwekutsvaga kutadza kwemuchina wekuumba, firita yemhepo yakavharika. Nekuti iyo pombi yekutsvaira inogona kuburitsa imwe mvura panguva yekusimudzira maitiro, iyo firita chinhu mumhepo firita ichavharwa nekuwedzera imwe yekune dzimwe nyika mupombi kwenguva refu. ...
Kugadzirisa kukundikana kwakasangana paunenge uchishandisa zvakakwana otomatiki Kuumbwa muchina
1. Nekuda kwekureba-kwenguva kudengenyeka, kuumba mikana yekuvandudza inoramba ichioneka. Inotevera kukundikana kwemuchina kukundikana: Iwo matanhatu M20 hexagon socket screws inobatanidza iyo vibration tafura uye iyo vibration pisitoni yakasunungurwa, kuti paine mukaha pakati petafura tafura nepiston s ...
Kuti uvandudze kururamisa kwe otomatiki kuumbwa muchina, iko kupenya kuduku kwekuparadzanisa mutsara kwakanyatsogadziriswa. Muchina wekuumba unogona kushandiswa mushe, zvakavimbika uye zvakachengeteka nekuti inotyairwa neiyo hydraulic system. Iyo michina yakagadzirirwa robhoti, iyo inogona kudzikisa iyo ...
Sei anofanira matambudziko nevakawanda otomatiki Kuumbwa mutsetse kuti overhauled?
一. Kuongororwa kwemachina nemidziyo 1. Iyo chirongo chinofanira kunge chisina kumira, uye chimiro chemidziyo chinofanirwa kuve chinoshanduka uye chakavimbika. Tinofanira kumisikidza padhi rekuvhara pakati pechivharo uye nesilinda yekuvhundutsa seyinotora ruzha uye yekuvhundutsa. 2. Tsvimbo yemutungamiriri kana bhuroko rekutungamira rinofanirwa kuve ...
Nzira yekuita sei nekudzima kwemuchina wekugadzira muchina pasi pemamiriro akasiyana?
1. Nyarara mushure mekuchinja Vanhu vanowanzo fanira kusiya basa wapedza basa uye unofanirwa kumira. Mune ino kesi, vashandi vekugadzira vanofanirwa kutarisa muchina wekuumba kuti pasave nezvimedu zvezvinhu mumidziyo. Naizvozvo, vanhu vanogona kuchengeta michina yakachena nekuchenesa. 2. Yemazuva shu ...
Otomatiki kuumba muchina vagadziri vanogovana sei kusarudza nzira yekuumba?
1. Kukodzera kuenzana kwekukanda. Kana uchigadzira castings neakakwirira epamusorosoro kunyatsoita uye yakakwira yepamusoro mhando zvinodiwa, nzira yekuumba yejecha yekumanikidza inofanira kusarudzwa. 2. Kukanda zvinhu. Vakasiyana vachikanda zvinhu vane zvakasiyana zvinodiwa kune jecha muforoma kuomarara. -Gener ...
How kuongorora uye kugadzira zvakajairika matambudziko otomatiki Kuumbwa mutsetse?
Iko kiyi yemagetsi zvigadzirwa zve otomatiki kuumbwa mutsara inofanirwa kuiswa uye kuchengetwa nevashandi venguva yakazara, uye basa rekuchengetedza rinofanira kuitwa chero nguva uye chero kupi. Wedzera mafuta kumagirinda uye kutungamira shafti zuva nezuva. Iyo template inofanirwa kuve yakasimba, uye yakakosha bhokisi screws inofanira kusimbiswa ...
How kusarudza Kuumbwa nzira otomatiki Kuumbwa muchina?
1. Kukodzera kuenzana kwekukanda. Kana uchigadzira castings neakakwirira epamusorosoro kunyatsoita uye yakakwira yepamusoro mhando zvinodiwa, nzira yekuumba yejecha yekumanikidza inofanira kusarudzwa. 2. Kukanda zvinhu. Vakasiyana vachikanda zvinhu vane zvakasiyana zvinodiwa kune jecha muforoma kuomarara. Genera ...
3 siyana shutdown ezvinhu otomatiki Kuumbwa muchina
1. Nyarara mushure mekubva kubasa Vanhu vanowanzo fanira kusiya basa vapedza basa, saka vanofanirwa kumira. Muchiitiko ichi, vashandi vekugadzira vanofanirwa kutarisa muchina wekugadzirisa zvakakwana kuti parege kuva nezvimedu zvezvinhu mumidziyo. Naizvozvo, vanhu vanogona kuchengeta michina yakachena ne cl ...
Chinwiwa richigadzirisa, Chinwiwa Mould Machine, Richigadzirisa vachikanda chinu, Sandbox, Semi-Automatic richigadzirisa Machine, Punch Out Muchina,